अंगभंग संवैधानिक अंग – बाइरोडको बाटोमा
by गुणराज लुइँटेलPosted on September 17, 2020 October 19, 2020
कुनै पनि पदाधिकारी आफ्नो जिम्मेवारीबाट अलग हुँदा तिनले गरेका कामको वासलात तयार हुन्छ। असल काम बढी भए भने तिनलाई बारम्बार सम्झना गर्नुपर्ने परिस्थिति आउँछ। अख्तियार प्रमुखका रूपमा घिमिरेले सत्तानिकट व्यक्ति जोडिएका मुद्दालाई एकपछि अर्काे गर्दै तामेलीमा राखेर आममानिसमा भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाही भनेको सुब्बा/खरदार तहका कर्मचारी तर्साउने निकायका रूपमा आफूलाई सीमित गरेका छन्।
६५ वर्षे उमेर हदका कारण बिदा भएर घर जाँदै गर्दा घिमिरेलाई यतिबेला भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न उल्लेख्य भूमिका खेल्ने व्यक्तिका रूपमा चित्रण गर्नुपर्ने अवसर थियो। त्यो अवसर उनले दिएनन्। उनी घर जाँदै गर्दा उनले नगरेका कामको चर्चा सर्वत्र रह्यो। अब बिस्तारै उनलाई सबैले तथ्यप्रमाण भएर पनि निर्णय गर्न नसक्ने अख्तियारको एक पूर्व पदाधिकारीकारुपमा चिनिरहने छन्। केही वर्षपछि कसरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने भन्ने चर्चा/परिचर्चामा उनै हुनेछन्। विधिको विडम्वना !
उनले जाने बेलामा के भने ? धेरैले त्यसलाई वास्ता गरेको देखिएन। २०७५ असोज ४ मा प्रमुख आयुक्त नियुक्त हुनुअघि पनि उनी त्यहीँ आयुक्तका रूपमा रहेका थिए। आयुक्तदेखि प्रमुख आयुक्तसम्म हुँदा ५ वर्ष ५ महिना १० दिन उनले टंगालस्थित ‘रातो दरबार’ मा बिताएका थिए। तत्कालीन प्रमुख आयुक्त दीपकुमार बस्न्यातको कार्यकाल सकिएपछि २०७४ फागुन २ देखि नै उनी कार्यबाहक प्रमुख भइसकेका थिए।
राज्य संयन्त्रको उच्च तहका व्यक्ति जोडिएका मुद्दा तामेलीमा पुग्न थालेपछि अख्तियारको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ। आखिर यस्तो संवैधानिक निकायको आवश्यकता नै किन छ ? १ हजार रुपियाँको घुस मुद्दामा सामान्य कर्मचारीले आत्महत्या गर्नुपर्ने र ठूला भ्रष्टाचार मुद्दामा संलग्नको गौरव यथास्थितिमा रहने अहिलेको परिपाटीलाई कसरी स्वीकार गर्ने ? वास्तवमा अहिलेसम्म भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाहरू त्यसैमा संलग्न केही व्यक्तिले सार्वजनिक कुरा चुहाउँदा मात्र सार्वजनिक हुने हो। बल्ल त्यसलाई प्रेसले पनि थाहा पाउने स्थिति हुन्छ।
आयल निगमकै जग्गा खरिदसम्बन्धी अनियमितताको खोजी पनि एउटा संयोग मात्र थियो। यो खबर कुनै सूत्रले भन्दा पनि एक जना मित्रले यो पंक्तिकारलाई दिएका थिए। हामीलाई कहाँकहाँ जग्गा खरिद भएको छ भन्ने थाहा पाउनसमेत केही महिना लागेको थियो। निकै गोप्य किसिमले बुझ्दै जाँदा यी तथ्य फेला परेका थिए। वास्तवमा प्रेसले यी सूचना नखोजेको भए त्यो केही महिनामै कार्यान्वयनमा जान्थ्यो, कसैलाई मतलव हुने थिएन। अहिले पनि किनेका जग्गा यथावत् कार्यान्वयनमा गएकै छन्। पैसा पाउनेले पाइसकेका छन्। अख्तियारले पनि यसलाई तामेलीमा राखिदिएपछि कुरै सकियो। यतिका प्रमाण देख्दादेख्दै अख्तियारका आफ्नै ऐन, नियम र कार्यविधि छन् भन्दै उन्मुक्ति दिन मिल्छ ? यो ऐन, नियम र कार्यविधि होइन आफ्नै स्वार्थ समूह हेरेर मात्र निर्णय गरेको देखिएन र ?
जाँदाजाँदै अख्तियारका निवर्तमान प्रमुख घिमिरेले भनेको यो वाक्यलाई फेरि हेरौँ, ‘आयोगले सञ्चार माध्यममा आएका विषयलाई सूचनाको रूपमा ग्रहण गर्छ। तर सञ्चार माध्यमबाट निर्देशित भने हुँदैन।’ सञ्चार माध्यमले यहाँ कसैलाई निर्देशत हुन भनेकै छैन। जे/जस्ता सूचना आएका छन्, तिनको राम्रो विश्लेषण, अनुसन्धान आदि गरेर मुद्दा तयार पार्ने जिम्मेवारी उसको हो। आफैँ तामेलीमा राख्नेभन्दा पनि अदालतमा त्यसलाई प्रस्तुत गर्नुप-यो। अदालतले त्यो विषयमा आधार प्रमाण हेरेर निर्णय गर्छ। तर यस्ता ठूला मुद्दाले अदालतको मुख देख्नै नपाउने भएका छन्। अख्तियार आफैँले त्यसलाई ढाकछोप गरिदिन्छ।
संवैधानिक निकाय अख्तियारले तोकिएको काम गर्न नसकेको यसमा हुने नियुक्तिका कारण हो। सत्तारुढ दलका नेताका निम्ति प्रियपात्र हुने व्यक्ति मात्र त्यहाँ नियुक्त हुन सक्छन्। प्रमुख विपक्षले पनि कोटामा स्थान पाइहाल्छन्। अनियमितताबाट जोगाउने अनुचरलाई त्यहाँ पु-याउन नेताहरूको रस्साकस्सी त्यसैका निम्ति त हो। नियुक्ति भएपछि आयुक्त बन्नेहरूले स्वतन्त्र निर्णय गर्न सक्दैनन्। सबैजसो काममा ‘जाहेरी’ गर्ने परिपाटी विकास भइकेको छ। जाहेरीबाटै त्यहाँबाट काम गर्नुभन्दा प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति कार्यालयमै एउटा ‘जाहेरी’ शाखा राखौँ। त्यसैमा व्यक्तिले आफूलाई परेको पिरमर्काबारे जाहेरी दिने र त्यहाँबाट हुने निगाहकै आधारमा न्याय प्राप्त हुने परिपाटी विकास गरौँ।
नागरिक, १ आश्विन २०७७ १०:२९ बिहीबार
Posted in Nagarik daily, Nepali, Opinion, WritingsTagged अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, बाइराेडकाे_बाटाेमा, संवैधानिक_अंग
Prev ’कोरोना जितेको होइन, बाँचेर आएँ‘
Next स्वास्थ्य सवाल